Mahombekombe - Nhau dzekufambisa | Nhau dzekufambisa (Peji 2)
Mhenderekedzo dzakanakisisa muSpain
Isu tinokuudza iwe kuti ndeapi mahombekombe akanakisa muSpain, mamwe mahombekombe makuru ane jecha ekushanyira.
Isu tinokuratidza iwo akanakisa mavhavha muMallorca, madiki maparadhiso kuti unakirwe nemazororo ako.
Isu tinokuudza iwe kuti ndeapi mabhishi akanakisa muHuelva uye nehunhu hwavanazvo kuti iwe ugone kunyora pasi kana ndiko kwauri kuenda.
Mabhichi akanakisa ekushambira
Vanoda Surf vanongoda yavo bhodhi, yavo wetsuit uye mamwe mafungu akanaka kuti vafarire iyo ...
Sant Feliu de Guixols ine yakakura kwazvo nhaka. Asi, pamusoro pezvose, inokupa iwe akanaka mabheji uye makoji munzvimbo isingaenzanisike.
Paradhiso mahombekombe epasi
Isu tichaenda kuziva maparadhisoac mahombekombe epasi, aine akati wandei emahombekombe ane jecha kushanyira pasi redu.
Cala Xarraca, inoyevedza kona muIbiza
Ibiza ndeimwe yeBalearic Islands inozivikanwa nekuve imwe yenzvimbo huru dzevashanyi muEurope ...
Mahombekombe eCabo de Gata
Tiri kutaura nezvemabhichi akanakisa munzvimbo yeCabo de Gata iri muAlmería, ine nzvimbo dzakanaka dzine jecha kuti unakirwe nezhizha.
Isu tinokuudza zvaunogona kuona nekuita paBolonia beach, inzvimbo inozivikanwa ine jecha iri munzvimbo yakasikwa muCádiz.
Isla Cristina ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi paHuelva mhenderekedzo, iri makiromita mashoma kubva ...
Gungwa reKunyarara, muAsturias
Kunyarara Gungwa. Izita rakadii! Saka nhetembo, isinganzwisisike, mumwe haakwanise kubatsira kuda kuenda kunosangana naye, handiti? ...
Tiri kupinda muzhizha, uye kana tisati tave pazororo pfungwa yekuve pamahombekombe kunyorova ...
Mahombekombe anotendera imbwa muAsturias
Imbwa dzinofarira kusvetuka mumafungu egungwa uye dzichimwaya mumvura senge vanhu….
Mahombekombe anotendera imbwa muCantabria
Torre del Mar nemazango ayo
Zhizha riri kuuya uye isu tave kutofunga nezvekuenda kwedu kuzororo. Isu tinofarira gungwa here, sunbathing ...
Tourism muGungwa Rakafa
Imwe yenzvimbo dzinoshamisa kwazvo pasi rose ndiro Gungwa Rakafa. Zvirokwazvo wakanzwa nezvake uye une ...
Cathedrals Gungwa muLugo, Galicia
Playa de las Catedrales inzvimbo ine jecha iri kuchamhembe kwedunhu reLugo muGalicia, inozivikanwa nematombo ayo.
5 Mahombekombe eFuerteventura pazororo rako rinotevera
Fuerteventura ndechimwe chezvitsuwa zvakanakisa uye zvakasarudzika muCanary Islands nekuda kwenzvimbo yayo yakaoma uye ine makomo.
Inguva yechando here yekufunga nezve zhizha? Eheka! Ndiyo apo patinosuwa zuva uye kupisa zvakanyanya, saka zvinoita kuti iwe ude kuronga ako mazororo.Benidorm igungwa rakakura uye husiku husiku kuenda kuSpain neese eEurope. Sandi dzegoridhe, mvura yakajeka yegirazi, zuva rakawanda, mapato mazhinji.
Cala Mitjana, zhizha kuenda
Menorca zvakare, zvakare ichi chitsuwa chakanaka nemhenderekedzo dzacho dzakanaka chinoratidzwa senzvimbo inozivikanwa kwazvo uye yakakurudzirwa zhizha kuenda. Hausati waenda kuzororo here zhizha rino? Wobva waenda kuMenorca uye pano usamise kupisa kwezuva muCala Mijtana.
Zvekuita pachitsuwa cheTavira
Zhizha riri kuuya! Kana iwe ukayambuka uchienda kuPortugal unogona kushanyira Algarve gungwa uye ikoko unoshanyira Chitsuwa cheTavira nemabhichi aro. Uye iwe unogona kutoita nudism.
Iwo akanaka Bays eHuatulco
Iwe unofarira machena jecha mabhishi here? Ipapo iwe unogona kuyedza iwo mahombekombe akanaka eBahías de Huatulco, muMexico Pacific.
Shanyira mahombekombe akanakisa muThailand
Tsvaga kuti ndeapi mahombekombe akanakisa muThailand ausingafanire kupotsa parwendo rwako kuenda kune ino nyika yakanaka, kubva kune chakabatikana kuenda kune vasina kukanganiswa.
Mhenderekedzo dzakanakisa muCancun
Mahombekombe eCancun anokodzera rondedzero yeparadhiso: turquoise mvura, jecha jena, uye kupenya kwezuva….
10 emahombekombe akanakisa muTenerife
Aya ndiwo mamwe emabhichi gumi akanakisa muTenerife, nzvimbo dzine jecha dzinoshamisa dzinoratidza runako rweichi chitsuwa.
Mhenderekedzo dzakanakisa muValencia
Mahombekombe eValencia ndeimwe yenzvimbo huru muSpain kune avo vanoda kunyepa muzuva uye ...
Mhenderekedzo dzakanakisa muAsturias
Tsvaga emahombekombe akanakisa muAsturias, mahombekombe ari pamahombekombe akanaka eAsturian, akakomberedzwa nenzvimbo dzechisikigo, mamwe akasarudzika pasirese.
Mhenderekedzo dzakanakisa muPortugal
Isu tinokuudza iwe kuti ndeapi mahombekombe akanakisa muPortugal, nyika ine mazana emakiromita emahombekombe egungwa kuti unakirwe nemahombekombe ane jecha.
Mhenderekedzo dzakanakisa muMallorca
Tsvaga emahombekombe akanakisa muMallorca, kubva kumahombekombe madiki uye akanyarara kune mamwe mahombekombe ari munzvimbo dzevashanyi.
Shanyira kumahombekombe eDubrovnik
Tsvaga zvakanakisa kushanya kumahombekombe eDubrovnik nenzvimbo dzakapoterera, makona erunyararo padyo neguta kuti unakirwe nekuzorora kuzororo.
6 dzeEuropean mahombekombe ekuenda kutizira kune
Tsvaga dzimwe dzakanakisa nzvimbo dzeEuropean dzekunzvenga uchitsvaga akanaka mamahombekombe ane kristaro akajeka mvura.
Gulpiyuri gungwa, parera reAsturias
Uri kuronga kuenda kumahombekombe anotevera zhizha here? Wobva watarisa kuAsturias nemahombekombe ayo. Gulpiyuri iparera rinokosha.
Zororo rezhizha rinowanzo fananidzwa nemahombekombe, zuva, gungwa uye bhawa regungwa. Zvidzidzo zvakasiyana zvinoratidza kuti imwe chete ...
Iwe unofungei nezvemabhichi eTunisia ezhizha rino 2017? Ivo iparadhiso yechokwadi uye une zvese: nhoroondo, matongo, chikafu, mahombekombe uye mafaro.
Dzimwe nzvimbo dzezhizha muUruguay
Brazil haisiriyo yega nzvimbo yezhizha muSouth America. Uruguay ine yakanaka spas: Punta del Este, La Pedrera, Chuy ...
10 mahombekombe muSpain kuti arasike ino zhizha
Tsvaga gumi makuru emahombekombe muSpain atinoda kupotsa ino zhizha. Arenales anoenda kubva kuchamhembe kuenda kumaodzanyemba achipfuura nemu zviwi.
Tiza kupisa kweLisbon, kumahombekombe!
Uchashanyira Lisbon muzhizha here? Nekudaro, kuti usanyungudike, tora famba uchitenderedza imwe yemahombekombe ayo. Kune mahombekombe padyo neLisbon ayo akanaka!
7 emahombekombe akanakisa kumaodzanyemba kweItari
Kana mamiriro ekunze akanaka achisvika tinenge tichida kuenda kumahombekombe, uye sezvo avo vari munharaunda medu vatozivikanwa, isu ...
10 yemahombekombe akanakisa pasirese muna 2017
Tsvaga kuti ndeapi gumi emahombekombe akanakisa pasirese 10. Rondedzero inonakidza kwazvo yekuti unakirwe nemakungwa ane jecha rakanakisa.
Mabhichi akanakisa muCroatia
Tsvaga mamwe emakungwa anoonekwa akanakisa muCroatia. Maguta emahombekombe kana emahombekombe emahombekombe pazvitsuwa, mamwe akasarudzika.
Zvitatu zvinokurudzirwa nzvimbo dzekugara muMaldives
Ungada here zororo muparadhiso? Maldives akadaro uye pano tinokusiyira matatu sarudzo dzekuzorora dzine matatu akasiyana mareti. Iwe sarudza!
Mhenderekedzo dzakanakisa muGalicia
Isu tinokuudza iwe kuti ndeapi mamwe emahombekombe akanakisa muGalicia, paradhiso iyo yatingawane mahombekombe akanaka ejecha.
Rwendo rweBarbados, iyo nyika yeRihanna
MuCaribbean hapana chakafanana neBarbados nemahombekombe ayo. Waiziva here kuti Rihanna anobva ikoko?
Mahombekombe akanakisa eMelbourne
Takaenda kuMelbourne, Australia, kuti tione mamwe emahombekombe akanakisa muMelbourne uye tinakirwe nenzvimbo dzakanakisa munzvimbo ino.
Mabhichi akanakisa embwa muSpanish Mediterranean
Imbwa hadziwanzo kuda kupisa zuva kusvikira dzasvinwa asi dzinoda kukwira mugungwa. Pasina…
Beaches uye coves muMijas
Nhasi tinoziva mahombekombe nemakungwa ayo atinogona kuwana muMijas, imwe yenzvimbo huru dzevashanyi kuMalaga Costa del Sol
Mhenderekedzo dzakanakisa muCantabria
Iwe unoda kupedza zhizha pamhenderekedzo here? Wobva waziva mahombekombe eCantabria, pakati pezvakanakisa muSpain.
Mabhichi akanakisa muCanary Islands
Mabhichi akanakisa muCanary Islands ari mumaguta, kana munzvimbo yakasikwa. Kune mahombekombe ezvese zvido, negoridhe kana dema jecha.
Mhenderekedzo dzakanakisa dzeGungwa Dema muRomania
Isu tinoziva mamwe emahombekombe akanakisa ayo anogona kuoneka paGungwa Dema mhenderekedzo muRomania kuitira kuti iwe unakirwe nemazororo ako munyika ino kuzere.
Mabhichi akanakisa muCádiz yekupedza zhizha
Tiri kutaura pamusoro pemahombekombe akanakisa muCádiz, nzvimbo huru kuti unakirwe nemamiriro ekunze akanaka munzvimbo ino yeAndalusia.
Enda nembwa yako kumahombekombe
Muchikamu chino iwe unowana akawanda emahombekombe eSpanish kwaunogona kuenda pasina matambudziko nembwa yako. Enda nembwa yako kumahombekombe!
Kana iwe uchida zuva, gungwa nemhenderekedzo yegungwa, hapana chinhu chiri nani kupfuura Girisi uye pakati pezvitsuwa zvaro, Crete ndiyo yakanakisa, saka ndinokusiyira iwe akanaka mabheji.
5 nudist mahombekombe muSpain kuratidzira yakasarudzika
Tsvaga mashanu makuru emahombekombe emahombekombe muSpain kuratidzira yakasarudzika. Spaces pakati pechisikirwo nenzvimbo dzakanaka dzechisikigo.
5 mahombekombe akanaka muCyprus kunakidzwa nezhizha 2016
Ko zvakadii nekunakidzwa nemabhichi eCyprus ino zhizha 2016? Ndinokusiira mashanu ari pakati pemahombekombe akanakisa muCyprus.
Iwo mahombekombe eBlue Mepu ane masevhisi ese uye nehunhu hwakanaka hwezvakatipoteredza, uye isu tichakuudza nezvevamwe vari kuSpain.
Zhizha 2016, tsvaga iwo mahombekombe akanyarara muPortugal
Uri kutsvaga mabichi here ino zhizha 2016? Wobva wasvika pakuziva aya akanaka uye asiri akakurumbira mabhishi muPortugal. Uchavada!
Iwo mahombekombe gumi anonyanya kufarira pasi rose (II)
Isu tinoenderera mberi nemabhichi anonyanya kufarira pasi rese. Isu tinotaura nezve mahombekombe ane zvidhori, nematombo kana nemawere anoshamisa.
Iwo mahombekombe gumi anonyanya kufarira munyika (I)
Tsvaga mahombekombe gumi anonyanya kufarira munyika. Mahombekombe ejecha jecha, ane anonakidza maroja kana anoshamisa matombo mafomu.
5 mahombekombe muSardinia kunakidzwa pazororo
Takawana mahombekombe mashanu akanaka muSardinia ayo ari maparadhiso echokwadi muMediterranean kuti unakirwe nemazororo.
Zvakanakisa zveCosta Brava: Cala Corbs
Cala Corbs inosanganisirwa munzvimbo yechisikigo yeEs Castell, imwe yemhandara inovhara iyo ichiripo kumahombekombe eGirona, kumasipala wePalamós
Wakaneta nechando here uye unongofunga nezve zhizha? Zhizha rakafanana nemahombekombe uye gungwa uye vanhu vazhinji havafungi mwaka wezhizha vasina mazuva mashoma uye
Makungwa mashanu makuru munyika
Tinokuratidza makungwa mashanu makuru pasi rese uye isu tinokuudza izvo zvakasarudzika zvega zvega uye kwaanowanikwa.
Mahombekombe akareba kwazvo muEurope
Tsvaga mahombekombe akareba kwazvo muEurope nepasi rose. Kune chero ani muSpain? Pinda uye unakirwe nemabhichi aya kwauchazoda sunbathe uye gungwa.
Iyo Algarve, inofamba nemumahombekombe ayo akanakisa
IAlgarve ine mamwe mahombekombe makuru pamhenderekedzo yayo. Isu tinokuudza kuti ndeapi mabheji akanakisa munzvimbo ino yekumaodzanyemba kwePortugal kuti ushanyire.
Iyo Yakarara Shumba, ichibhururuka muGalapagos Islands
Shumba Yakarara (kana Dombo raKicker muChirungu) chitsuwa chisina vanhu makiromita mashoma kubva kuSan Cristóbal archipelago
Cap d'Agde, guta guru re nudism
Cap d'Adge pamhenderekedzo inokwezva zviuru zvevashanyi vari kutsvaga kuita nudism, iwe unoda kuziva pekugara kwavo, kuraira uye zviitiko zviripo?
Mufambi Alphabet (I)
Zvichida mavara aya anofamba (I) anogona kukutungamira kuronga iwo marwendo ausati waita uye uchida kuita kana kamwechete muhupenyu hwako. Ungatsunga?
3 emahombekombe akanakisa muAndalusia
Kune akawanda mabhishi muAndalusia anozivikanwa uye akakura, uye tinokuratidza matatu akanakisa, ausingafanire kupotsa kana uchifamba uchienda kumaodzanyemba.
Iwo mahombekombe gumi akanakisa pasirese muna 10
Tsvaga emahombekombe akanakisa munyika ya2015, akasarudzwa nevashandisi uye vafambi paTripAdvisor, nzvimbo dzekurota zororo rinotevera.
Zvikonzero zvekurasika kuAndalusian Western Coast (I)
Iwe unofunga isu tinofanirwa kukupa iwe zvikonzero zvekurasika paAndalusian Western Coast (I)? Heano mashoma, uye mangwana zvakanyanya uye zvirinani.
Sunny kunzvimbo munaNovember
Nzvimbo dzine zuva munaNovember ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kune avo vane zororo panguva ino. Tsvaga nzvimbo dzinonakidza dzekushanyira.
Poipu Beach muHawaii
Poipu Beach iri pachitsuwa muHawaii, rakakura kwazvo gungwa rizere nemhando dzemasevhisi kuti unakirwe nezororo rako.
Pamusoro 3 Mahombekombe muJamaica
Chitsuwa cheJamaica inzvimbo yakakwana yekunakidzwa nemahombekombe. Kune matatu mabhishi anoonekwa seakanyanya kunaka uye aunofanirwa kushanyira.
Goridhe Sands, yakanakisa gungwa muBulgaria
Goridhe Sands ndeimwe yemahotera mahombe pamhenderekedzo yeBulgaria paGungwa Dema
Mabhichi anogadzirwa sei?
Mabhichi anogadzirwa sei? Mune ino ipfupi chinyorwa isu tichakutsanangurira kwauri.
Zhizha 2015, akanakisa mahombekombe muMontenegro
Mushure mekudonha kweRusvingo rweBerlin uye nekugadziriswazve kweEastern Europe, nzvimbo nyowani dzakabuda pamepu ...
Mahombekombe eDurban, South Africa
Mahombekombe eDurban, pakati pemahombekombe akanakisa muSouth Africa
Stiniva, gungwa rakavanzika muCroatia
Stiniva igungwa rakavanzika muCroatia, kwatichave takanyarara kwazvo. Tsvaga iyi inoyevedza kona.
Matatu emahombekombe akanaka kwazvo pasirese
Kushamisika pamatatu aya emahombekombe akanaka kwazvo pasi rese. Ivo vakakodzera kuyemurwa uye kufungisisa!
Mahombekombe eTroia Peninsula, muPortugal
Kunze kweLisbon kune Troia peninsula ine mamaira nemakiromita emahombekombe akanaka
Paraty, pamhenderekedzo yekuchamhembe kweBrazil
Paraty iguta rinoyevedza remahombekombe pamhenderekedzo yekuchamhembe kweBrazil, maawa mana kubva kuRio
Rimini beach, nzvimbo ine jecha yekunakidzwa
Rimini pamhenderekedzo ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo zhizha muItaly. Iri igungwa rakazara nekunakidzwa.
Corniche, iyo inonyanya kufarirwa ruzhinji rwegungwa mu Abu Dhabi
Corniche Beach kana Corniche ndiyo inonyanya kufarirwa ruzhinji rwegungwa mu Abu Dhabi
Sokha, rimwe remakungwa akanaka muCambodia
Sokha Beach iri mudunhu reCambodian reSihanoukville
Tropea gungwa muItari
Tropea Beach iri paCalabrian Coast, muItaly, uye inzvimbo inoshamisa.
La Paloma, yegungwa chic muFrance
La Palomar pamhenderekedzo yegungwa yeFrance iri padyo neNice
Shell Beach, mahombekombe kuGuyana uko hove dzinoisa mazai adzo
Shell Beach muGuyana ndipo panowanikwa hove dzegungwa gore rega rega
Mhenderekedzo dzakanakisa muHong Kong
Muchikamu chino isu tinokuudza iwe kuti ndeapi mamwe emahombekombe akanakisa iwe aunowana muHong Kong
Jericoacoara, pakati pemahombekombe akanakisa muBrazil
Jericoacoara Beach, rimwe remabhichi akanakisa muBrazil
Artic Resort Kakslautten, muSweden Lapland
Artic Resort Kakslautten, igloos muLapland
Miyako Islands, maJapan echiCaribbean
Mahombekombe eMitako Islands, mahombekombe muJapan, muOkinawa
Mabhichi akanakisa muChina
Muchikamu chino tinoita ongororo diki yemamwe emahombekombe akanakisa iwe aunowana muChina. Unovaziva vese here?
Zvitsuwa zvakanakisa muCaribbean, sekureva kweUSA Nhasi
Pepanhau reAmerica USA Nhasi rakaburitsa runyorwa rwezvitsuwa zvakanakisa muCaribbean zvekushanya kwemahombekombe
Mhenderekedzo dzakanakisa muOman
Isu tinoziva mamwe emabhichi akanakisa atinogona kuona muOman
5 anoyevedza mahombekombe muMediterranean
Tinokupa iwe diki runyorwa nemamwe mashanu akanaka emahombekombe atinogona kuwana kumahombekombe eMediterranean.
Mhenderekedzo dzakanakisa muCosta Rica
Isu tinoenda kuCosta Rica kunowana mamwe emahombekombe akanakisa munyika
Iwo gumi nemashanu akanakisa nudist mahombekombe (II)
1 - Montalivet (France) Sangano renyika dzese naturist rakatanga pano muna 1950 ndokuwana rukudzo ...
Iwo gumi nemashanu akanakisa emahombekombe emahombekombe (I)
Kune dzimwe nzira dzakawanda uye dzakawanda dzekuita pazororo redu uye nhasi tinowana sarudzo zhinji ...
Kana iwe uchizogadzirira kuenda kuPortugal, hazvikuvadze kuziva kuti ndeapi mahombekombe anokatyamadza auchazokwanisa kuwana munyika ino nemumaguta.
Pink Gin kumahombekombe muGranada
Pedyo nePoint Salinas airport, iri rakanaka gungwa inzvimbo ine mukurumbira muGranada, ayo akadzikama mvura ...
Akanakisa maDiscos, Makirabhu uye Mabhawa muAsia (Chikamu 1)
Kazhinji patinofunga nezvekuenda kuAsia, kushanyira mausoleums, tsika dzekare, kushanya ...
Kana usati waenda kuAsia, Singapore ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa kutanga nadzo. Kwete chete nekuti kubvira ...